Izindaba - Isingeniso Samathemba Okuthuthuka Kwesikhathi Samabhokisi Wokukhanya Kwe-Acrylic
Isingeniso Samathemba Okuthuthuka Kwesikhathi Esizayo Amabhokisi Wokukhanya Kwe-Acrylic
Ibhokisi lokukhanya le-blister liyibhodi lezimpawu nophawu lwesitolo, olumele isithombe salo. Ngakho-ke, umklamo uzogqamisa izinzuzo zesitolo uqobo. Umsebenzi webhokisi lokukhanya elingaphambili yisikhangiso sebhokisi lokukhanya, futhi isikhangiso senoveli nokukhanya okuyingqayizivele singaheha abantu abaningi ukuthi baphathe. Ukukhiqizwa kwamabhokisi wokukhanya we-acrylic kufanele kwenziwe ngokwezifiso ngokwesilinganiso sonke sesitolo nezinto zomhlobiso wangaphakathi.
Amabhokisi wokukhanya kwe-blister kufanele enziwe ngamabhokisi akhanyayo anokukhanya okuphezulu, okungangeni manzi, ukuvimbela umoya nokuqina. Amafonti wezimpawu zebhokisi elikhanyayo njengezinhlamvu ezikhanyayo zepulasitiki, izinhlamvu ezikhanyayo ze-LED, izinhlamvu ze-acrylic, izinhlamvu ze-resin, izinhlamvu ze-acrylic eziphansi, izinhlamvu zomzimba wonke ezikhanyayo, izinhlamvu zensimbi engenasici, njll. Amabhokisi wokukhanya we-Acrylic ayindlela enhle kakhulu emabhokisini we-facade light. Yonga ugesi futhi iqine, ithatha indawo encane, futhi inesithombe esicacile, esidonsela ukunaka kwabantu.
Isibonisi esikhanyayo esikhanyayo senza ibhokisi elikhanyayo le-acrylic lilethe ukwaziswa okukhulu esitolo. Idizayini enhle yebhokisi lokukhanya nayo ilethela abantu injabulo emnandi, futhi ngasikhathi sinye ivumela abantu ukuthi bakhumbule kalula izinto eziqhutshwa yisitolo, futhi ngokwemvelo bazocabanga ngokuthola umnyango lapho bewudinga.
Ukuqondiswa kokuthuthuka kwezobuchwepheshe kwebhokisi le-blister light: ukonga amandla, ukuvikelwa kwemvelo nokuluhlaza. Ibhokisi lokukhanya elonga kakhulu amandla nokonga imvelo lizomela ukuthuthuka okuzayo. Uma kusetshenziswa amandla elanga kupuleti yomhlahlandlela wokukhanya nobuchwepheshe be-LED, ngeke isathembela ohlelweni lokuphakela kwendabuko futhi izibize ngohlelo. Ukonga amandla, ngaphandle kwezintambo nokwakhiwa kwezintambo, kunciphisa umonakalo odalwe ngamaringi enziwe ngabantu. Futhi amandla elanga aphephe ngokuphelele, ngeke abangele ukuvuza kukagesi noma izingozi zokushaqeka kagesi, kunciphisa kakhulu izingozi zokusebenza nezingozi zokuphepha. Amandla elanga ngumthombo ovuselelekayo oluhlaza futhi onemvelo, ngokuhambisana nezinqubomgomo zikazwelonke zokunciphisa ukungcola, futhi umkhuba wezikhathi. Kukholakala ukuthi ukusetshenziswa kobuchwepheshe bamandla elanga kuzohlinzeka ngethemba eliqhakazile lokuthuthukiswa komkhakha webhokisi lokukhanya le-acrylic.
Isikhathi Iposi: Dec-17-2020
Izimpawu Zokukhangisa, I-Pharmacy Signboard, Ibhodi lokungena elingaphandle le-Light Light, Umshini Owenza Ibhokisi Elikhanyayo Lebhodi Lesibonakaliso, I-Blister Light Box Signboard, Izimpawu Ezikhanyisiwe,